Wadahadallo u dhaxeeya midawga Yurub iyo Iiraan oo maanta ka dhacaya Brussels | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Wadahadallo u dhaxeeya midawga Yurub iyo Iiraan oo maanta ka dhacaya Brussels
Sida laga soo xigtay afhayeenka Arrimaha Dibedda ee Midowga Yurub Peter Stano, waxaa maanta magaalada Brussels, ku kulmi doonaan Cali Baaqiri, kaaliyaha Wasiirka arrimaha dibadda Iiraan, ahna madaxa wada xaajoodka Nukliyeerka iyo xubno ka socda waddamada midawga Yurub.
Wafdi ka socda Dowladda Iiraan ayaa habeenimadii Talaadada, gaaray magaalada Brussels ee xarunta dalka Belgium-ka, halkaasi oo uu ka bilaaban doono wada xaajood laba geesood ah oo u dhaxeeya Iiraan iyo waddamada reer Yurub, si ay ugu wada hadlaan arrimo ku saabsan Nukliyeerka Iiraan.
Wadahadallada ku saabsan Nukliyeerka Iiraan ayaa hakad galay kadib doorashadii madaxtinimo ee Iiraan ka dhacday bishii June, taas oo uu ku guuleystay madaxweyne Ibraahim Ra’iisi.
Maraykanka iyo Yurub, ayaa dadaal ugu jira in Dehraan ay dib ugu soo laabato miiska wada xaajoodyada, iyaga oo ka baqdin qabo in barnaamijka tayeynta Yuraaniyaamka Iiraan uu ka gudbo xadkii loo dejiyay.
Next articleHowl galkii ka socday Guriceel oo la soo afjaray